Faah Faahin: Weeraro Lagu Dhiig bixiyay Ciidamada AMISOM Oo Ka Dhacay Deegaanka Ceel Wareegoow Sh/Hoose.
Sunday February 04, 2018 - 20:43:22 in Wararka by Super Admin
Dagaallo khasaara badan dhaliyay ayaa markale dib uga qarxay wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalooyinka Marka iyo Afgooye oo dhammaantood katirsan Sh/Hoose.
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in weeraro khasaara badan dhaliyay lagu qaaday ciidamo katirsan AMISOM.
Ciidamo katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa duleedka magaalada Marko waxay weerar dhabbagal ah ugu dhigeen ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaana jira khasaara soo gaaray ciidamada la weeraray.
Warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in gaari xamuul ah ciidamada shisheeye looga gubay weerarkii maanta oo ahaa mid aad u xooggan islamarkaana saacado badan qaatay..
Ciidamada Shisheeye oo kolonyo ahaa ayaa markii ay marayeen deegaanka Ceel wareegow waxay ku dheceen weerar culus oo jidgal ah oo in mudda ah socoday waxaana xigay qaraxyo lala eeganayay gaadiid xamuulka ee saadku usaarnaa ciidamada huwanta ah.
Dadka deegaanka waxay sheegeen in sheedda sare ay ka arkayeen gaari gubanayo, wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada la weeraray ay rasaas xoogga fureen.
Habqanka ciidamada ayaa la sheegay in uu wali jidyaal ku yahay wadada mana gaarin deegaanka Buufoow oo uu kuyaal saldhigga ugu horreeya ee ciidamada AMISOM ku leeyihiin wadada laamiga ah.
Khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegay in ciidamada Uganda uu kasoo gaaray weerarka waxaana aad u adkaaday in ciidamada saldhigyada ku leh deegaanno dhowr ah oo Sh/Hoose katirsan ay sahay isku kala gudbiyaan, weerarada Jidgalka ah ayaa halakeeyay dhaq dhaqaaqyada ciidamada AMISOM ee duullaanka ku jooga Soomaaliya.